“Ho Tonga ny Farany”—Faminanian’ny Baiboly, Fizarana 7
“Ho Tonga ny Farany”
TEZITRA ve ianao rehefa mahita mpitondra fanjakana mampijaly sy manararaotra vahoaka? Hitanao hoe tsy rariny ve ny ataon’ireo mpandraharaha mambotry ny mahantra mba hampitomboana ny harenany? Sosotra ve ianao mahita hoe manararaotra ny ondriny ny mpitondra fivavahana sady mampianatra zavatra diso? Mety hahafaly anao àry ny mahalala fa melohin’ny Baiboly izany fanao izany. Horesahin’ity lahatsoratra ity 1) ny faminaniana milaza fa tsy hisy intsony ny ratsy fanahy sy ny zava-dratsy rehetra, ary 2) ny antony atokisantsika tanteraka an’izany.
Tsy hisy intsony ny faharatsiana
Noresahin’ny fizarana faha-6 amin’ity andian-dahatsoratra ity ny famantarana hoe efa akaiky ny faran’ity tontolo ity. Anisan’izany ny fitoriana maneran-tany an’ilay vaovao tsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra, izay hitondra ny tany manontolo tsy ho ela. (Daniela 2:44; Matio 24:3, 14) “Ho tonga ny farany”, hoy i Jesosy, rehefa vita io asa fitoriana io. Ho gaga angamba ianao hahalala fa ny fivavahan-diso, izay tsy mampianatra ny marina momba an’Andriamanitra, no hofoanana voalohany. Oharin’ny Baiboly amin’ny vehivavy mpivaro-tena antsoina hoe “Babylona Lehibe” ny fivavahan-diso.—Apokalypsy 17:1, 5; jereo ilay efajoro hoe “Iza moa i Babylona Lehibe?”, eo amin’ny pejy 13.
‘Ho tonga ny loza hanjo an’i Babylona Lehibe, dia fahafatesana sy alahelo ary mosary. Ary hodorana tanteraka amin’ny afo izy, satria mahery i Jehovah Andriamanitra, izay nitsara azy.’—Apokalypsy 18:2, 8.
Fahatanterahany: Resahin’ny Baiboly fa hataon’Andriamanitra izay hankahalan’ireo fitondrana ara-politika an’i Babylona Lehibe sy handringanany azy, amin’ny fotoana voatondrony. “Handroba izay ananany rehetra sy hampitanjaka azy” izy ireo, “ary hanapitra ny nofony.” (Apokalypsy 17:16) Hahariharin’izy ireo ny toetra ratsiny ary horobainy ny harem-beny. Tsy haharitra ela ny fandringanana azy ary ho fongotra tanteraka izy.—Apokalypsy 18:21.
Mety hihevitra ireo mpitondra politika fa eritreriny samirery ny nanaovany an’izany. Sitrapon’Andriamanitra anefa ny handringanana an’i Babylona, matoa tanteraka io faminaniana mampitolagaga io. ‘Hataony ao am-pon’izy ireo ny hanatanteraka ny heviny.’—Apokalypsy 17:17.
‘Amin’ny andron’ireo mpanjaka ireo, dia hanorina fanjakana ilay Andriamanitry ny lanitra. Hotorotoroin’izy io sy hofoanany ireo fanjakana [naorin’olombelona] rehetra ireo, fa izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra.’—Daniela 2:44.
Fahatanterahany: Hifantoka amin’ny fikambanana ara-politika sy ara-barotra ary amin’ireo ratsy fanahy Andriamanitra, rehefa tsy eo intsony ny fivavahan-diso. (Ohabolana 2:22; Apokalypsy 19:17, 18) Hesorin’ny tompon-trano ny mpanofa rehefa manimba ny tranony. Toy izany koa fa ‘horinganin’Andriamanitra izay manimba ny tany’ sy mahatonga azy io ho feno herisetra sy fitondran-tena ratsy.—Apokalypsy 11:18; Romanina 1:18, 26-29.
Iza no ho tafavoaka velona? Hoy ny Baiboly: ‘Ny mpandefitra no handova ny tany, ka tena ho finaritra amin’ny fiadanam-be.’—Salamo 37:11; 72:7.
Azo itokisana ve ny faminanian’ny Baiboly? Tena hitsimbina ny olo-marina ve Andriamanitra ary hamarana ny faharatsiana sy fijaliana? Izany tokoa!
Azo itokisana ny faminanian’ny Baiboly
Horinganin’ny Fanjakan’Andriamanitra ny fivavahan-diso rehetra sy ny fitondrana mampahory ary ireo mpivarotra tia vola tafahoatra
Mino ny Vavolombelon’i Jehovah fa Andriamanitra no nampanoratra ny Baiboly ary hotanterahiny izay rehetra nampanantenainy. (2 Timoty 3:16) Mitombina ve ny zavatra inoan’izy ireo?
Aoka hatao hoe misy olona iray namanao efa ela ary tena tia anao sady mbola tsy nandainga taminao mihitsy. Hino azy ve ianao raha mampanantena zavatra tsara anao izy ary azony tanterahina izany? Azo antoka fa hino azy ianao. Ka tsy vao mainka ve ianao tokony hatoky an’Andriamanitra? “Tsy mahay mandainga” mantsy izy.—Titosy 1:2.
Tsy tian’ilay Andriamanitra Mahery Indrindra hinohino befahatany isika. Nasainy nanoratra faminaniana maro kosa ireo mpanoratra Baiboly, ary izy ihany no afaka manatanteraka an’izany. Noresahin’ireo fizarana enina teo aloha ny maro amin’ireny faminaniana ireny sy ny fahatanterahany. Afaka matoky àry isika fa hotanterahin’Andriamanitra ireo faminaniany momba ny hoavy, anisan’izany ireo voalaza ato amin’ity lahatsoratra ity.
Horinganin’ilay Mpamorona tokoa ny fivavahan-diso sy ny fitondrana mampahory ary ireo mpivarotra tia vola tafahoatra. Tianao ho fantatra ve izay hitranga aorian’izay? Hiresaka an’izany ny tapany farany amin’ity andian-dahatsoratra ity, ao amin’ny Mifohaza! manaraka.
Nahoana isika no milaza fa manondro ny fivavahan-diso rehetra ilay vehivavy an’ohatra atao hoe Babylona Lehibe, ao amin’ny Apokalypsy? Ireto misy porofo:
Tsy vehivavy ara-bakiteny izy io satria ny sary an’ohatra ao amin’ny Apokalypsy dia “famantarana” ihany.—Apokalypsy 1:1.
I Babylona Lehibe dia mipetraka eo ambonin’ny rano maro, izany hoe “olona sy vahoaka sy firenena.” (Apokalypsy 17:1, 5, 15) Tsy misy vehivavy mahavita an’izany. Betsaka kosa ny olona manaraka ny fivavahan-diso sy mampandroso azy io.
“Tanàna lehibe” io vehivavy io ary “mifehy an’ireo mpanjakan’ny tany.” Midika izany fa fandaminana iray manan-kery eran-tany izy io.—Apokalypsy 17:18.
Mpivaro-tena an’ohatra i Babylona Lehibe satria manao fifanekena amin’ny “mpanjakan’ny tany”, izay halahelo noho ny fandringanana azy. (Apokalypsy 17:1, 2; 18:9) Tsy fandaminana ara-politika àry izy io.
Malahelo koa ny mpanao raharaham-barotra rehefa ringana izy. (Apokalypsy 18:15) Tsy fandaminana ara-barotra koa àry izy.
Toy ny mijangajanga ny mampifangaro ny fanompoana an’Andriamanitra sy ny fitiavana an’izao tontolo izao, hoy ny Baiboly. (Jakoba 4:4) Izany indrindra no ataon’i Babylona Lehibe. Mampirisika ny olona hifandray amin’ny fanahy ratsy koa izy.—Apokalypsy 18:23.
Nalaza ho mpivavaka be ny tanànan’i Babylona fahiny, ary avy amin’ny anarany ilay hoe Babylona Lehibe.—Isaia 47:1, 12, 13; Jeremia 50:1, 2, 38.
Azo antoka àry fa ny fivavahan-diso rehetra eto an-tany no atao hoe Babylona Lehibe.
Tanisaina eto ambany ireo faminaniana miavaka noresahin’ireo lahatsoratra enina teo aloha. Tanteraka daholo izy ireo, araka ny efa hitantsika.
FAMINANIANA MOMBA AN’I ABRAHAMA SY NY TARANANY
Ho lasa firenena lehibe ny taranak’i Abrahama, ilay lehilahy nanam-pinoana. Lasa nantsoina hoe firenen’Israely izy ireo.—Genesisy 12:1, 2.
Hiverina any amin’ny tany Kanana ny taranak’i Abrahama rehefa avy nivahiny tany an-tanin’olona nandritra ny 400 taona.—Genesisy 15:13, 16.
Ho lasan’ny taranak’i Abrahama “ny tany Kanana manontolo.”—Genesisy 17:8.
Nikomy tamin’Andriamanitra ny Israelita ka navelany ho resin’ny Babylonianina sy ho lasa babo.—Jeremia 25:8-11.
Haverin’Andriamanitra ao amin’ny taniny ny Jiosy rehefa avy natao sesitany nandritra ny 70 taona.—Jeremia 25:12; 29:10.
Ho rava i Babylona, ilay firenena natanjaka tamin’izany, ka ho lasa korontam-bato.—Isaia 13:19, 20.
FAMINANIANA MOMBA NY MESIA SY NY MPANARA-DIA AZY
Ho avy amin’ny taranak’i Davida Mpanjaka ny Mesia na Kristy.—Isaia 9:7.
Ho teraka ao Betlehema ilay Mesia.—Mika 5:2.
Hiseho ny Mesia, 483 taona aorian’ny “fotoana hivoahan’ny didy hanarenana an’i Jerosalema sy hanamboarana azy.” Tamin’ny 455 Talohan’i Kristy (T.K.) no nivoaka ilay didy.—Daniela 9:25.
Hokapohina mafy amin’ny karavasy izy alohan’ny hamonoana azy.—Isaia 50:6.
Hovonoina toy ny mpanao heloka bevava tsy tian’ny olona ny Mesia, nefa halevina miaraka amin’ny “mpanankarena.”—Isaia 53:9.
Hitory ny hafatr’i Kristy manerana an’i Jodia sy Samaria ary any amin’ny faritra hafa ny mpianany.—Asan’ny Apostoly 1:8.
Henjehina ny Kristianina.—Marka 13:9.
Hisy mpamitaka sy olona masiaka hiditra mangingina eo anivon’ny fiangonana kristianina, ka hitaona ny maro hivadi-pinoana.—Asan’ny Apostoly 20:29, 30; 2 Petera 2:1, 2.
FAMINANIANA MOMBA NY ANDRO FARANY
Ireto no famantarana ny andro farany:
Hotorina maneran-tany ny ‘vaovao tsara [momba ny fanjakan’Andriamanitra].’—Matio 24:14.
Ady maneran-tany.—Matio 24:7; Apokalypsy 6:4.
Horohoron-tany lehibe.—Lioka 21:11.
Fankahalana sy herisetra.—Matio 24:10, 12.
Ho tia vola sy ho tia tena ny olona.—2 Timoty 3:1-5.
Hizara Hizara Tanteraka ny Faminanian’ny Baiboly—Fizarana 7